Ugu yaraan labo askari oo katirsan ciidamada Puntland oo ku dhaawacmay is-rasaasayn dhexmartay burcadbadeeda oo ka dhacday deegaan xeebeed u dhow Caluula - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandUgu yaraan labo askari oo katirsan ciidamada Puntland oo ku dhaawacmay is-rasaasayn dhexmartay burcadbadeeda oo ka dhacday deegaan xeebeed u dhow Caluula
March 16, 2017 Abdi Omar Bile Puntland, Somalia 0
Ugu yaraan labo askari oo katirsan ciidamada Puntland oo ku dhaawacmay is-rasaasayn dhexmartay burcadbadeeda oo ka dhacday deegaan xeebeed u dhow Caluula. [Sawirka: Archive]
Garoowe-(Puntland Mirror) Ugu yaraan labo askari oo katirsan ciidamada Puntland ayaa ku dhaawacmay kadib markii ay rasaas is-weydaarsadeen burcadbadeeda kuwaasoo markab ganacsi ku afduubtay xeebta degmada Caluula ee gobolka Bari asbuucaan horaantiisii, sida uu sheegay sarkaal.
Mowliid Xasan, oo ah sarkaal katirsan ciidamada badda Puntland ee PMPF ayaa Puntland Mirror khadka taleefoonka ugu sheegay in iska hor imaadku uu ka dhacay deegaan xeebeed u dhow degmada Caluula subaxnimadii hore maanta oo Khamiis ah.
Isku dhaca ayaa dhacay kadib markii ciidamada PMPF ay joojiyeen dooni yar oo saad u siday burcadbadeeda, sida uu sheegay sarkaalku.
Dhacdadan ayaa imaanaysa kadib markii Puntland ay ciidamo badan oo katirsan PMPF u dirtay deegaan xeebeedka gobolka Bari si ay burcadbadeeda uga badbaadiyaan markabka iyo shaqaalaha saaran.
July 9, 2017 Ciidamada Ammaanka Puntland oo burburiyay saldhig ay Al-Shabaab ku lahaayeen Buuraha Galgala
January 3, 2017 Madaxweynaha dowladda Puntland oo Boosaaso tagay
Somali pirates free commercial vessel after one week in captivity
Mogadishu-(Puntland Mirror) Puntland football team has thrashed South West 4-0 in the first match of Somali regional states tournament. Goals from Yaqub Osman and Abdiwahid Dhakab Dhakab gave Puntland team a 4-0 victory over South [...]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Kooxda kubada cagta ee Puntland ayaa ku garaacay Koonfur Galbeed 4-0 ciyaartoodii ugu horeysay ee koobka maamul goboleedyada Soomaaliya. Goolal ay ka heleen Yacquub Cusmaan iyo Abdiwaaxid Dhakab Dhakab ayaa u suurta gashay [...]